Waa maxay TASC? Baro wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato oo ku saabsan TASC | USAHello | USAHello
TASC waa shahaado muujinaysa in aad leedahay aqoon la mid ah sida qof kuwaas oo dhamaystay dugsiga sare ee USA. Gudbinta baaritaanka TASC kaa caawin kara inaad guulaystaan ​​more. Waxaad u isticmaali kartaa si aad shaqo u hesho fiican iyo in aad tagtid jaamacadda.
Waa maxay baaritaanka TASC ah?
TASC waa baaritaan aad waxgarasho iyo aqoon leh. Magaca TASC gaaban Imtixaanka Qiimaynta Dhameystirka Secondary ™. Gudubto imtixaanka TASC muujiso inaad leedahay aqoon isku mid ah iyo xirfadaha sida qof ka qalin jebin dugsiga sare ee USA.
Dad badan oo Maraykan iyo qaxootiga iyo doolka ma ayna karin inay ku dhameysan dugsiga sare awood. Haddii aan shahaadada dugsiga sare, waxay noqon kartaa adag si aad u hesho shaqo fiican oo ku guulaystaan ​​Maraykanka. Laakiin haddii aad imtixaanka ku gudubto TASC ah, waxaad ka heli diblooma (shahaadada) ka gobolkaaga. Waxaa lagu magacaabaa dugsiga sare u dhiganta (HSE) shahaadada, si aad mararka qaarkood waxay arkaan ama maqlaan baaritaanka loo yaqaan imtixaanka HSE.
shahaadada TASC ayaa sheegay in aad leedahay oo u dhiganta (isku mid) xirfadaha sida qof kuwaas oo dhamaystay dugsiga sare ee dalka Mareykanka. Tani waa guul aad u weyn! Ma aha oo kaliya oo aad ka heli doonaa waxbarashada, laakiin waxaad u baahan doontaa doorasho shaqo fiican.
Waa maxay baaritaanka TASC sida?
Baaritaanku wuxuu qaadanayaa dhowr saacadood iyo waxaa loo qaybiyaa dhowr mawduucyada. Waxaad qaadan kartaa mawduucyada on maalmood oo kala duwan. Waxaad qaadan kartaa imtixaanka on computer ama warqad.
Waxaa jira shan maadooyinka imtixaanka: cilmiga bulshada, sayniska, xisaabta, akhriska iyo qoraalka. Waxaad ka jawaabi doontaa su'aalo badan oo ku saabsan mawduucyo oo dhan.
Waad awoodaa bartaan imtixaanka. Waxa kale oo aad sameyn kartaa in fIND sida inay imtixaanka.
Sidee baan u baran imtixaanka TASC ah?
The RCO ee TASC / HiSET / GED online lacag la'aan ah® fasalo dabooli maado kasta ee imtixaanka. Waxaad bilaabi kartaa fasalka markasta oo aad diyaar u tahay. Inta badan ardayda ku dhameysan hal maaddo labo todobaad gudahood labo bilood ah. Waxaad bilaabi kartaa oo waxaad xidhaan mar walba. Waxaad qadan karaan casharada. Waxaad dooran kartaa mawduuca aad rabto in lagu bilaabo.
my gobolka ma bixiyaan baaritaanka TASC ah?
Waxaad ma qaadan karaan imtixaanka TASC ee gobolka kasta. Fiiri shaxda hoose si aad u ogaato oo imtixaanka waxaa la siiyaa ee gobolka.
Haddii dawladda ma bixiyaan TASC, waxaad weli heli kartaa shahaadada. Waxaad qaadan kartaa imtixaanka HiSET ama GED ah® imtixaanka ee gobolka. Fiiri miiska mar kale si ay u arkaan taas oo ka mid ah.
imtixaanka HiSET waa sida GED ah® imtixaanka. The shahaadada HiSET ™ ayaa sheegay in aad leedahay aqoon isku mid ah iyo xirfadaha sida qof kuwaas oo dhamaystay dugsiga sare ee USA.
Inay qaataan imtixaanada, aad u leedahay in xarunta imtixaanka tagtaa. Waxaad qaadan kartaa imtixaanka on computer ama warqad.
Sida loo qaato imtixaanka TASC ah
Raadi macluumaadka aad u baahan tahay inaad iska diiwaan gelin iyo inay qaataan imtixaanka TASC ah. Marka aad ka gudubto maaddooyinka oo dhan, waxaad heli doontaa shahaado.
Sida loo qaato TASC ah imtixaanka
Maxay ee imtixaanka TASC ah?